ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံ မီးလုံးများနှင့် မီးပုံးများ ထုတ်လုပ်သူများ - China Explosion-proof lamps and lanterns Suppliers & Factory
BGD စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ မြင့်မားသောတိုင်မီးခွက်
1. နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးပရောဂျက်များ၊ အာကာသအင်ဂျင်နီယာ၊ ဆိပ်ကမ်းအင်ဂျင်နီယာ၊ သိုလှောင်ရုံ၊ အကြီးစားအန္တရာယ်ရှိသောကုန်စည်ဂိတ်၊ ရေနံတွင်းတူးဖော်ရေးနှင့် ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသော ဗဟိုမီးအလင်းရောင်နေရာများ၏ ကြီးမားသောဧရိယာလိုအပ်ပါသည်။
2. ဇုန် 1၊ ဇုန်2ရှိ ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဓာတ်ငွေ့လေထုနှင့် သက်ဆိုင်သည်။
3. II A, IIB, II C ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဓာတ်ငွေ့ atmo-spheres များတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်၊
4. လောင်ကျွမ်းနိုင်သော ဖုန်မှုန့်ပတ်ဝန်းကျင် 21, 22;
5. မြင့်မားပြီး စိုစွတ်သောနေရာများ၏ အကာအကွယ်လိုအပ်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။
FCT95 စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ စစ်ဆေးရေးမီးအိမ်
1. ရေနံရှာဖွေရေး၊ ရေနံသန့်စင်ရေး၊ ဓာတုဗေဒ၊ စစ်ရေးနှင့် အခြားသော အန္တရာယ်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်များနှင့် ကမ်းလွန်ရေနံပလပ်ဖောင်းများ၊ ရေနံတင်သင်္ဘောများနှင့် စစ်ဆေးရေးနှင့် မိုဘိုင်းအလင်းရောင် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အခြားနေရာများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည်။
2. ပေါက်ကွဲစေတတ်သောဓာတ်ငွေ့ပတ်ဝန်းကျင်ဇုန် 1၊ ဇုန် 2;
3. ပေါက်ကွဲစေသောလေထု- အတန်းအစား IIA၊ IIB၊ IIC;
4. ဧရိယာ 21, 22 ရှိ လောင်ကျွမ်းနိုင်သော ဖုန်မှုန့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သင့်လျော်သည်။
5. မြင့်မားသောကာကွယ်မှု၊ စိုထိုင်းဆနှင့်အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့လိုအပ်သောနေရာများအတွက်သင့်လျော်သည်။
6. မိုဘိုင်းစစ်ဆေးရေးအလင်းရောင်အတွက် သင့်လျော်သည်။
BSD4 စီးရီး ပေါက်ကွဲခြင်း ခံနိုင်သော မီးရောင်
1. ရေနံထုတ်ယူခြင်း၊ ရေနံသန့်စင်ခြင်း၊ ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ စစ်ရေးနှင့် အခြားအန္တရာယ်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကမ်းလွန်ရေနံပလပ်ဖောင်းများ၊ ရေနံတင်သင်္ဘောများနှင့် ဘုံအလင်းရောင်နှင့် အလုပ်အလင်းရောင်အတွက် အခြားနေရာများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။
3. ပေါက်ကွဲသောလေထု- အတန်း ⅡA၊ⅡB၊ ⅡC;
4. ဧရိယာ 22၊ 21 ရှိ လောင်ကျွမ်းနိုင်သော ဖုန်မှုန့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သင့်လျော်သည်။
5. မြင့်မားသောအကာအကွယ်လိုအပ်ချက်များ၊ စိုစွတ်သောနေရာများအတွက်သင့်လျော်သည်။
BSD4 စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ ပရောဂျက်မီးအိမ်
BAD63-A စီးရီး ဆိုလာပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ လမ်းမီး
1. ရေနံရှာဖွေရေး၊ သန့်စင်ရေး၊ ဓာတုဗေဒ၊ စစ်ရေးနှင့် ကမ်းလွန်ရေနံပလပ်ဖောင်းများ၊ ရေနံတင်သင်္ဘောများ စသည်တို့ကဲ့သို့သော အန္တရာယ်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည်။ အထွေထွေအလင်းရောင်နှင့် အလုပ်အလင်းရောင်အသုံးပြုမှု၊
2. အလင်းရောင် စွမ်းအင်ချွေတာရေး ပရောဂျက်များနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အစားထိုးရန် ခက်ခဲသော နေရာများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်၊
3. ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဓာတ်ငွေ့ပတ်ဝန်းကျင်၏ ဇုန် 1 နှင့် ဇုန်2တွင် သက်ဆိုင်သည်။
4. IIA၊ IIB၊ IIC ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဓာတ်ငွေ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်၊
5. မီးလောင်လွယ်သော ဖုန်မှုန့်ပတ်ဝန်းကျင် 21 နှင့် 22 ဧရိယာများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်၊
7. အပူချိန် -40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထက် နိမ့်သောပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သင့်လျော်သည်။
FCBJ စီးရီး ပေါက်ကွဲခြင်း-ခံနိုင်သော အသံပိုင်းဆိုင်ရာ-အလင်းပြန်ကြားချက်
1. ရေနံရှာဖွေရေး၊ ရေနံသန့်စင်ရေး၊ ဓာတုဗေဒ၊ စစ်ရေးနှင့် အခြားအန္တရာယ်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်များနှင့် ကမ်းလွန်ရေနံပလပ်ဖောင်းများ၊ ရေနံတင်သင်္ဘောများနှင့် မတော်တဆမှု အချက်ပြအချက်ပြမှု သို့မဟုတ် အချက်ပြညွှန်ပြမှုအဖြစ် အခြားအန္တရာယ်ရှိသောနေရာများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။
ABSg စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ တိုင်ကီ စစ်ဆေးရေး မီးအိမ်
1. ဒေသန္တရ မီးထွန်းရေး ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ရေနံထုတ်ယူခြင်း၊ ရေနံသန့်စင်ခြင်း၊ ဓာတုဗေဒ၊ စစ်ရေးနှင့် အခြားသော အန္တရာယ်ရှိသော နေရာများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုခြင်း၊
MSL4700 စီးရီး ဘက်စုံသုံး အိတ်ဆောင် ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံ မီးလုံးများ
2. ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဓာတ်ငွေ့ပတ်ဝန်းကျင်ဇုန် 0၊ ဇုန် 1၊ ဇုန် 2;
4. ဧရိယာ 20၊ 21၊ 22 ရှိ လောင်ကျွမ်းနိုင်သော ဖုန်မှုန့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သင့်လျော်သည်။
JM7300 စီးရီး အသေးစား ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံ ဓာတ်မီး
IW5510 စီးရီး အိတ်ဆောင်အလင်း ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ စစ်ဆေးရေး အလုပ်မီးများ
IW5130/LT စီးရီးအသေးစား ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော ရှေ့မီးများ
5. မြင့်မားသောကာကွယ်မှု၊ စိုထိုင်းဆနှင့်အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့များလိုအပ်သောနေရာများအတွက်သင့်လျော်သည်။
BS51 စီးရီး ပေါက်ကွဲခြင်း-ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဓာတ်မီး
၁။ရေနံရှာဖွေရေး၊ ရေနံသန့်စင်ရေး၊ ဓာတုဗေဒ၊ စစ်ရေးနှင့် အခြားအန္တရာယ်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်များနှင့် ကမ်းလွန်ရေနံပလပ်ဖောင်းများ၊ ရေနံတင်သင်္ဘောများနှင့် စစ်ဆေးရေးနှင့် မိုဘိုင်းအလင်းရောင်ဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အခြားနေရာများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည်။
၂။ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဓာတ်ငွေ့ပတ်ဝန်းကျင်ဇုန် 1၊ ဇုန်2အတွက် သင့်လျော်သည်။
၃။ပေါက်ကွဲနိုင်သောလေထု- အတန်း ⅡA၊ⅡB၊ ⅡC;
၄။ဧရိယာ 22, 21 ရှိ လောင်ကျွမ်းနိုင်သော ဖုန်မှုန့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သင့်လျော်သည်။